यदि छिटो धनि बन्न चाहनुहुन्छ ? यी ८ कामले बनाउन सक्छ तपाइलाई करोडपति » Khulla Sanchar
यदि छिटो धनि बन्न चाहनुहुन्छ ? यी ८ कामले बनाउन सक्छ तपाइलाई करोडपति
एजेन्सी : आरामको जिबन पाउनको लागि जिन्दगी भरि मेहनत गर्नु पर्छ । तर कतिपय मानिसको काम यस्तो हुन्छ कि धेरै वर्ष काम गर्दा पनि बचतको नाममा केहि बच्दैन । आज हामी तपाइलाई बताउन गैरहेका छौ कि संसारका यस्तो ८ कामको बारेमा जसद्वारा मानिस केहि समयमा नै करोडपति बन्न सक्छ ।
घरमा आरामले बसेर तपाई ब्लगबाट करोडौ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यसको लागी तपाइको रचनात्मक लेखन हुनुपर्छ । प्रख्यात वेबसाइट बिजनेस इनसाइडरको अनुसार २०१६ साल ब्लगबाट पैसा कमाउनको लागि सबैभन्दा राम्रो स्रोत बनेको छ । तपाइलाई बताईदिउ कि वायरलनोवा ब्लगको सुरुवात गर्ने सकॉट डीलांगले जम्मा ८ महिनामा करोडौ कमाएका थिए । सबै पेजमा आउने गुगल याडको कारणले उनको आम्दानी धेरै बढेको थियो।
सेलिब्रिटी सोशल प्लेटफार्ममा इंस्टाग्रामको प्रयोग धेरै हुन्छ तर तपाइलाई थाहा छ कि यो अकाउन्टले तपाइलाई करोडपति पनि बनाउन सक्छ। यस्तो धेरै उदाहरण छन् जसमा युवतीहरुले आफ्नो कामुक तस्बिर पोस्ट गरेर मोडलिङ ठेक्का हासिल गर्छन् । यहाँ कामुक तस्बिर पोस्ट गरेपछि धेरै पत्रपत्रिकाले पनि तपाइको तस्बिर मन पराउछन् र त्यो तस्बिर करोडौमा किन्छन् ।
आजकलको समयमा बिना कुनै क्वालिफिकेसन छिटो पैसा कमाउने सजिलो माध्यम बनेको छ यूट्यूब। बस तपाइको साथमा छिन भरमै भाइरल हुनेवाला भिडियो बनाउने बिशेसता हुनु आवस्यक छ । वर्ष 2015-16 मा पिउडीपाई,जो गेमिंग भिडियो बनाउछन ,यूट्यूबबाट सबै भन्दा धेरै कमाइ गर्ने व्यक्ति बनेका छन् । 49+ मिलियन सब्सक्राइबर्सको साथमा उनको कमाइ पनि करोडौ पुगेको छ ।
हामी यसलाई करियरको रुपमा सजेस्ट गर्दैनौ तर कम समयमा पैसा कमाउनको लागि तपाई अनलाइन पोकर साइट्सको सहारा लिन सक्नुहुन्छ। तथापी यसमा लकधेरै महत्वपुर्ण हुन्छ। यदि तपाई जित्न सुरु गर्नुहुन्छ तब पैसा बनाउने मेसिन यहि हो ।
आजको समयमा प्रत्यक मानिस अनलाइन सपिंग गर्न चाहन्छन । यस्तोमा यो एक राम्रो जब अप्सन बनेको छ । यो जबले छिट्टै नाफा नदिए पनि केहि समय पछी यसबाट खास पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ ।
आजकल सबैसंग स्मार्टफोन हुन्छ । यदि तपाई कुनै मजाको एप बनाउनुहुन्छ,तब युवा त्यसलाई मन पराउछन । यी एप्सबाट कतिपय मानिसको भाग्य बदलिसकेको छ । यसमा फेसबुकका मार्क जुकरबर्गको नाम पनि छ । कम समयमा पैसा कमाउने यो सहि तरिका हो ।
यदि तपाइको दिमागमा कथा बनाउने ताकत छ भने त्यसलाई किताबमा उतारेर तपाई राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र एक बेस्ट-सेलिंग बुक तपाइलाई करोडपति बनाउन सक्छ ।
यदि तपाईमा सृजनात्मक सक्ति छ भने नया चिज आविस्कार गर्न सक्नुहुन्छ। यहि आविस्कारले तपाइलाई करोडपति बनाउन सक्छ।